Multi guurista Celceliska Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Multi guurista Celceliska Forex Tusiyaha
Multi guurista Celceliska Forex Tusiyaha
celceliska Guuritaanka waa mid ka mid ah tilmaamayaasha abid caadadii ugu fiican in suuqa Forex ee abid ka heli doontaa. Tilmaamayaasha Kuwan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa iyadoo tilmaamayaasha kale oo badan iyo sidoo kale inta badan ee ganacsi ee iswada. Celceliska dhaqaaqin sida magacaba ka muuqata, waa celcelis dynamically beddelo oo ka mid ah qiimaha suuqa hore. Waa firfircoon tan iyo markii ay isula beddalaa waqtiga sida qiimaha suuqa cusub waxaa keenay suuqa. Kuwan celceliska qiimaha suuqa, ganacsade awood u yeelan doonaan in ay helaan dhaqankan cusub ee suuqa iyo xitaa ogeyn marka ganacsiga iyo goorta aan la.
Si ka duwan jidka ku celceliska dhaqaaqin waxaa sida caadiga ah barbaro on shaxda ugu weyn ee ganacsiga sida line a socda qiimaha suuqa, tilmaame Celceliska ah Multi guurista waxaa soo bandhigay on shaashad gaar ah hoos shaxda ugu weyn ee ganacsiga sida dhowr laymanka dhibcaha la dhibcaha beddelo ay midabka ka cas aqua.
Nooca dhaqaaqin celceliska loo isticmaalo in tilmaamahan waa celceliska dhaqaaqin jibbaaranaha (HOOYO). caadada waxa lagu tilmaamayaa dhxe gudahood. EMAS loo isticmaalo waxaa ka mid ah muddooyinka ah 13,34,55,89. Markaas EMA oo dhan waxaa by default xagaajiyey in ay ka shaqeeyaan wakhti H1 ah.
Iyada oo tilmaame this dhaqankan cusub ee suuqa la tilmaamay by midabka halkii line a socda qiimaha suuqa. Marka midabka EMA waa guduudan yahay, isbeddel in lagu qorey isbedel hoos. Dhinaca kale haddii midabka ah ee EMA waa aqua, markaas isbeddel in lagu tilmaamayaa waa uptrend ah.
lagugu tuday sawirka.1. The Multi guurista tilmaame Celceliska.
Tilmaamahan kuma koobna in ay labo-labo lacag gaar ah, laakiin waxaa loo isticmaali karaa on mid ka mid ah labada ciyaaryahan ee lacagta aad doorashada. Waxa kale oo aad tahay xorriyad ay u isticmaalaan wakhti kasta oo aad doorato. Marka aad bedesho waqti go'an, waxaa la sheegi doonaa ka hor inta EMAS ee. Waxay leedahay oolnimada aad u dheer ay sabab u tahay xaqiiqada ah in dhowr EMAS waxaa loo isticmaalaa.
Marka la isticmaalayo Tilmaame celceliska Multi dhaqaaqin, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo ganacsade ah waa in mar walba maanka ku hayo. Kuwaas waxaa ka mid:
– midabka guduudan wuxuu muujinayaa hoos halka midabka aqua waxay muujinaysaa uptrend ah.
– Trading waa in la sameeyaa marka tilmaamayaasha oo dhan ayaa tilmaamaya midabka la mid ah. Haddii ay tahay aqua oo dhan waa in ay leeyihiin aqua iyo haddii ay tahay cas oo idil waa in cas.
– Marna ha ka ganacsan xitaa haddii seddex ka mid ah tilmaamayaasha soo bandhigayaa midabka la mid ah laakiin ka mid ah oo keliya ma aha.
– Ka dib u geliya ganacsiga ah, ganacsade ah waa in la xiro marka mid ka mid ah EMAS beddeli doonaa midab ka midabka loo isticmaalo in lagu dhigo ganacsiga si midabka ah oo iska soo horjeeda.
– Si kasta waa in lagu rakibaa ka dib markii dhibic labaad ama kan saddexaad ee EMA.
Saarid iibiyay a: iibiyay ah waxaa la dhigayaa on dhibic cas labaad ama saddexaad haddii EMAS oo dhan waa midabka cas.
Saarid iibsan a: buy ah waxaa la dhigayaa on dhibic labaad ama kan saddexaad aqua haddii EMAS oo dhan waa aqua midabka.
Fig.2. Saarid Xirfado isticmaalayo Tilmaame Celceliska ah Multi guurista.
Multi celceliska socdaa Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Multi celceliska socdaa Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Multi guurista Celceliska Forex Indicator.mq4?
Download Multi guurista Celceliska Forex Indicator.mq4
Copy Multi guurista Celceliska Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Multi guurista Celceliska Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Multi guurista Celceliska Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee in meesha laga saaro Multi guurista Celceliska Forex Indicator.mq4 ka Metatrader 4 Chart?
Celceliska dhaqaaqin Multi
article PreviousTaxane ilaaliye Forex Tusiyaha
Next articleWin Max Liiska Forbes Forex Tusiyaha